Dejinta Soo -dejinta - Liiska Faylka Fudud
Xaddidaadda Fidinta Faylka
U oggolow Faylka Soo rar
U muuji foomka soo dejinta qof walba, oo kaliya si aad u gasho isticmaaleyaasha, kaliya maamulayaasha ama cidna.
U oggolow in wax la qoro
Xullo u oggolow feylasha cusub inay beddelaan faylalka jira ama dib u magacaabaan faylasha cusub adoo ku daraya lambar.
Hel Macluumaadka Mulkiilaha Faylka
Muuji foom ay tahay in la buuxiyo ka hor inta aan faylka la soo rogin. Hel magaca milkiilaha faylka, emaylkiisa iyo sharraxaaddiisa.
Isticmaalayaasha soo galay, magacooda iyo cinwaanka iimaylkooda si otomaatig ah ayaa looga helaa macluumaadka koontadooda. Soo gudbinta waxaa lagu darayaa emaylka ogeysiinta soo-dejinta oo lagu daray faahfaahinta faylka, taas oo lagu tusi karo faylka.
Soo Deji Xadka Shaqada
Waad xadidi kartaa tirada faylasha ee la soo geli karo soo gudbin kasta.
Cabbirka Faylka ugu Badan
Waad xadidi kartaa cabirka feylka la soo gelin doono. Dejintan ayaa ku kooban adiga deegaanka martigelinta.
Xaddid noocyada faylasha ee la soo saari karo. Kaliya aqbal noocyada faylka aad gabi ahaanba ubaahantahay. Waa tan liiska qaar ka mid ah noocyada caanka ah:
Noocyada faylasha khatarta ah ee suurtagalka ah marwalba way ka xanniban yihiin gelitaannada.
Muuji Xadka Xadka
Tus macluumaadka isticmaalaha wixii ku saabsan waxa la soo rogi karo: cabirka faylka, lambarka iyo noocyada faylka.
Ma bedeli karaa muuqaalka taariikhda?
21 fikradood oo ku saabsan "Dejinta Dejinta"
Febraayo 8, 2021 at 3: 47 PM
Waxaan geeyay dukumiinti qaar Google Drive ka dibna waxaan u beddelay Docs / Sheets. Ka sokow Google Docs, waxaan rabaa inaan tixraaco dukumiinti maktabaddayda ku yaal oo ah iskuxirka dukumiintiga degel kale. Ma jirtaa qaab aan ku dari karo dukumiinti isku xira kaliya?
Febraayo 8, 2021 at 4: 00 PM
Hmmm. Suurtagal Faylka wuxuu ubaahan lahaa inuu noqdo feyl HTML ah oo ay kujiraan a sumadda dib -u -cusboonaysiinta. Marka isticmaaluhu furo faylka, waa inuu ku boodaa URL kasta oo aad u isticmaasho astaamaha mawduuca.
Febraayo 11, 2021 at 9: 12 AM
Mahadsanid. Waxaan ka fikiray suurtagalnimadaas mar uun markaan dhajiyay su'aashan. Wanaagsan in la arko waa waxa aad la timid. Waan isku dayi doonaa waana ku ogeysiin doonaa.
Fursad kasta oo aad ka fiirsan karto suurtagalnimada ku darista ikhtiyaariga ah inaad gasho xiriiriye? Waxaa jira kiisas badan oo aan tixraaco dukumiintiyada goobta ka baxsan.
Febraayo 11, 2021 at 9: 17 AM
Maya, taasi waxay noqoneysaa mid aan ammaan ahayn. Waxaan fiirinayaa Google Docs, Dropbox iyo adeegyo kale oo lala xiriirin karo iyaga API-yada in kastoo.
Febraayo 3, 2021 at 9: 05 AM
hi, waxaan isku dayaa inaan ka raadiyo dukumiintiyada iyo khadka tooska ah, laakiin waxba kamaan helin.
Waxaan ku rakibay fiilada oo soo dejintu way shaqeysaa, laakiin rarku wuxuu aqbalaa oo keliya feylka .jpg.
Anigu maan taaban liiska waan ka tagay asalka, laakiin markaan isku dayo inaan cusbooneysiiyo e png ama pdf waxay dhaheysaa: Nooca faylkaan lama ogola: pdf
maxaan khaldaa (cabirka feylku wuxuu kujiraa xadka waxaanan magaca u bixinayaa feylka)
Waad ku mahadsan tahay ka hor wixii talo bixin ah.
Febraayo 4, 2021 at 9: 14 AM
Fadlan u gudub tabta Dejinta> Dejinta Qalabka oo ku dar nooca faylka PDF.
December 1, 2020 at 3: 47 PM
Waxaan hayaa talo soo jeedin ku saabsan hanaanka faylalka loo soo raro. Waxaan hadda u beddelayaa WordPress degel ay martigelisay “Google Classic Sites” (kaligeyna kaligey kuma ahaan doono tan tan sanadka soo socda). Boggan waxaa ku yaal dukumiintiyo fara badan oo aan u soo mariyo SFL. Dhib malahan. Si kastaba ha noqotee, feylashaas oo dhan hadda waxay ku keydsan yihiin waxa loogu magac daray "Faylasha armaajo" ee Goobaha Google dhammaantoodna waxay leeyihiin sharaxaad ku lifaaqan. Haddii aan doonayo inaan ku daro sharraxaaddan inta la soo dejinayo, waa inaan mid mid u geliyaa, anigoo ku sii daraya sharraxaadda markasta. Tani waxay si dhakhso leh u noqon kartaa riyo cabsi leh.
Si kastaba ha noqotee, sharaxaadda ayaa si fudud loogu kaydin karaa feyl sidecar ah oo leh isla magaca faylka la soo dejinayo oo leh kordhin gaar ah sida ".desc" tusaale ahaan. Qaabkan, uploader-ka SFL wuxuu hubin karaa jiritaanka feyl noocan oo kale ah wuxuuna si otomaatig ah ugu darayaa sharraxaadda goobta ku habboon ka dib soo dejinta.
Adeegga Google Sites Classic wuxuu xiri doonaa sanadka soo socda. Waan ogahay in isticmaaleyaal badan oo adeegani ay hadda diyaarinayaan u guurista WordPress. Marka, keli kuma noqon doono dhibaatadan. Waana hubaa in inbadan oo adeegsadayaasha SFL ah inay qadarin doonaan awood u lahaanshahooda inay ku daraan sharraxaadda faylka inta lagu gudajiro wax badan.
Mise waxbaan ka maqanahay?
Hirgelinta astaantan uma baahna codeyn badan, waxaan qiyaasayaa: hubi jiritaanka feylka wehelka .desc, gal faylka, akhri waxyaabaha ku jira faylka .desc kuna dar qeybta Sharaxa
Fikir kasta oo ku saabsan tan?
Diisambar 2, 2020 at 10: 27 AM
Haa, mabda 'ahaan tani way fududaan lahayd in la hirgeliyo. Laakiin markii aad sidoo kale tixgeliso UI / UX iyo amniga waxaan ka baqayaa inaan ku daro muuqaalkan. Faylka sidecar waa fikrad xiiso leh, laakiin ma arko sida loo abuurayo feyl leh sharaxaadda gudaha waa ka dhakhso badan yahay nuqul-dhejis deg-deg ah oo ku saabsan aagga soo-gelinta sharraxa laftiisa.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira xarigyo dhejis ah oo la heli karo, markaa mid ayaa qori kara shaqeyn si sax ah u qaban laheyd waxa aad rabto iyada oo aan wax laga beddelayn qalabka.
Hawsha ayaa akhrin doonta feylka sidecar, fayodhowrka ka dibna u qor waxyaabaha ay ka kooban tahay Filelist ikhtiyaarka ku jira keydka xogta, ka dibna si ikhtiyaari ah u tirtir feylka dhinaca. Mid ayaa isticmaali kara faylka CSV oo ay ku jiraan magacyada faylka iyo sharaxaada sidoo kale.
Haddii aad u baahato xoogaa caawimaad ah tan, fadlan emayl ii soo dir.
Juun 13, 2020 at 5: 22 PM
Suurtagal ma tahay, oo miyaad ka fakiraysaa, inaad xadiddo gudbinta wixii aan ahayn Maamulka, sida Tabaruciyaha ama Tifaftiraha?
U oggolaanshaha dhammaan isticmaaleyaashu waa mid aad u ballaaran oo ay Admin kaliya tahay mid cidhiidhi ah. Waxaan haystaa dad aan jeclaan lahaa inaan u oggolaado in la soo geliyo, laakiin aan lahayn xuquuq maamul.
Juun 14, 2020 at 10: 38 AM
Haa, tani way soo dhowaanaysaa. I soo dir fariin hadaad jeceshahay inaad tijaabiso koobi hordhac ah.
Abriil 9, 2020 at 11: 16 AM
Qalabkani waa mid aad u fiican, waxaanan rajaynayaa inuu dhowaan dhakhso u yeelan doono tiro badan oo adeegsadayaasha wordpress ah. Isku xirku wuxuu umuuqdaa mid wanaagsan, laakiin waxaan heystaa weydiin yar. Fadlan ma bixin kartaa xulashooyin si aad uhesho goobo si aad ugu darto meelaha gaarka ah ee foomka soo dejinta, sida aan dhahno "Nooca", "isha xogta", iwm ikhtiyaariga ah inaad ku darto liistada faylasha sidoo kale, si ay u isticmaalaan faylka isticmaalayaasha waxaa laga dhigi karaa mid jaango'an. Waxay noqon laheyd caawimaad weyn qaabeynta degelkeyga.
Waxaan rajeynayaa inaan dhowaan kaa maqlo
Abriil 9, 2020 at 12: 03 PM
Mahadsanid. Inta badan isticmaaleyaashu uma baahna shaqadan, markaa tani waxay sameyn kartaa kordhin ballaaran. Ku darista qaab dhismeedka qaabeynta waxay ku dari doontaa culeysyo badan oo lambar ah. Sidee loo isticmaali karaa macluumaadkan dheeriga ah? La muujiyey oo ay la socdaan faylka ama kaliya lagu soo daray ogeysiiska soo dejinta?
May 31, 2021 at 2: 01 PM
Tani waa wax aan u baahanahay sidoo kale.
Waxaan u baahanahay inaan ku daro meelaha dheeraadka ah foomka soo dejinta sidoo kale qaab muuqaal ah oo loo yaqaan 'GDPR'. Meelaha dheeriga ah waxaa lagu dari doonaa emaylka ogeysiinta
Abriil 7, 2020 at 3: 18 AM
Maxay sharraxaadyada u muujin la’yihiin mar kasta oo adeegsadehu soo rogo feyl leh sharaxaad? Waxaan isku dayay tan naftayda waxaanan kaliya awoodaa inaan ku daro sharraxaadda guddiga kaliya. Waxaan rabaa in adeegsadayaashaydu ay soo rogaan feylal sharaxaad leh iyo inay si toos ah u muujiyaan sharraxaadda
Abriil 7, 2020 at 9: 37 AM
Kani wuxuu ahaa cayayaan lagu hagaajiyay Liiska Faylasha Fudud ee 4.2.1. Fadlan cusboonaysii.
Maarso 17, 2020 at 12: 20 AM
Ma awoodo inaan kordhiyo cabirka faylka ugu badan ee la soo rarto, in kasta oo wordpress maxuploadkeygu yahay 100MB. Fadlan caawi?
Maarso 17, 2020 at 8: 19 AM
Cabbirka ugu badan ee soo dejinta waxaa go'aamiya labada PHP upload_max_size iyo post_max_size. Pluginku wuxuu adeegsan doonaa wax ka yar labada. Hubi inaad hubiso in labada meeloodba ay ku filan yihiin baahiyahaaga.
Febraayo 12, 2020 at 11: 56 PM
ee ku jira isticmaaleyaasha? Sideen u abuuri karaa isticmaaleyaasha si ay wax u xareeyaan?
Febraayo 13, 2020 at 12: 25 PM
Isticmaal gashan ayaa ah isticmaale kasta oo ka muuqda bogga isticmaalaha guud, wuuna soo galay. Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa muuqaalka ereyga 'Password Protect' ee lagu dhisay WordPress si loo xakameeyo marin u helka feylka bogga loogu talagalay dadka aan Wordpress isticmaalin. Xullo "Qof Walba Wuu Soo Geli Karaa" gudaha Faylasha Soo Dejinta si markaas ay dhacdo.
December 6, 2019 at 12: 01 PM
Ma tirtiri karaa aagga macluumaadka? Ma doonayo in anyones faahfaahinta cinwaanka ka sareeya uploaderkayga, xanuunsan u isticmaal aniga oo ugu fayl gareeya pdf gelinta macaamiishayda si aan u arko PDFs aan u baahanahay
December 6, 2019 at 1: 43 PM
Haa. Waad qarin kartaa foomka macluumaadka la geliyo adiga oo adeegsanaya sanduuqa jeegga ee ku yaal bogga Waxyaabaha Uploader ah.